कस्तो छ आजको मौसम ? काठमाडाैंमा घाम लाग्छ कि लाग्दैन ? — Imandarmedia.com
काठमाडाैं । आज काठमाडाैं उपत्यकासहित देशभरको मौसम सफा रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । आज पनि हिजो जस्तै देशका धेरै ठाउँमा घाम लाग्ने मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले बताइन । उनका अनुसार आज काठमाडाैंको न्यूनतम तापक्रम ५ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।
अधिकतम तापक्रम भने २० देखि २२ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै भोलि बेलुकादेखि भने देशका केही ठाउँको मौसम बद्ली हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । स्थानीय वायुको प्रभावका कारण भाेलि बेलुकादेखि मौसम बद्ली हुने तर पानी भने नपर्ने मौसमविद् मानन्धरले जानकारी दिइन ।
जाडो मौसममा उपत्यकाको तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सयसभन्दा पनि तल ओर्लने गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकाका रहेका छन् । जाडो मौसममा शरीर कमजोर हुने हुँदा अन्य रोगसँगै कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्ने संभावना छ ।
हिजो आज काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम औसतमा ४ डिग्री सेल्सियस वरिपरी छ । जाडो मौसममा उपत्यकाको तापक्रम शून्य डिग्री सेल्सयसभन्दा पनि तल ओर्लने गरेको छ । सन् १९७८ जनवरी ११ मा काठमाडौंको तापक्रम माइनस ३ दशमलव ५ डिग्रीसम्म पुगेको रेकर्ड छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा कति डिग्रीसम्म तापक्रम घट्न सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न भने नसकिने मौसमविद्हरु बताउँछन् । सन् २०२० को अन्त्य र २०२१ को सुरुवातमामा औसत तापक्रम बढ्ने देखिए पनि तापक्रमको तथ्याकंको एकीन पूर्वानुमान गर्न सकिदैन ।
औसत तापक्रम बढ्दा वर्षा घट्छ । औसत तापक्रम लामो समयावधिलाई लिएर गणना गरिने हुँदा छोटो अवधिमा हुने तापमान घटबढले वातावरणमा असर पारेको हुन्छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यमै भेटिने गरेका छन् ।
जाडो मौसममा भाइरस लामो समय बाँच्ने तथा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर बन्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने संभावना छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामीलाई थप स्वास्थ्य जटिलता हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले चनाखो रहन सुझाव दिएका छन् ।
कोरोना संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु बढिरहेका बेला अहिलेको जाडो नेपालका लागि थप चुनौतीपूर्ण र खतरानाक बन्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । स्वास्थ्य उपचार र हेरचाहको राम्रो बन्दोबस्त नमिलाए ठूलो क्षति बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।